QARSOONAANTA BEERASHADA IYO DARYEELKA XAJMIGA EE BANNAANKA FURAN - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Quruxda ubaxyada ubaxu waa mid aad u kacsan in ay macquul tahay in la jeexo. Kala duwanaanta midabka iyo qaabka: mid ayaa ka heli kara labada baraf-cad oo ah baraf-cad ama midab-kareemo ah, iyo sidoo kale ubaxa casaanka ah iyo casaan-gaabka oo kale.
Wixii peonies had iyo jeer isku day in aad ku qaadato meesha ugu fiican ee beerta. Aynu aragnay sida loo doorto masruufka iyo xajmiga uu u baahan yahay.
Ma taqaanaa? Peonies Homeland - Shiinaha.
Xulashada goobta iyo diyaarinta dhulka for beerashada pion
Longevity ee ubaxaaga, iyo sidoo kale wax soo saarka iyo saameyn ku qurxinta waxay ku xiran tahay u hoggaansanaanta dhaqanka habboon ee beeraha, iyada oo la tixgelinayo doorashooyinka nafleyda ee peonies.
Doorka gaarka ah waxaa lagu ciyaari karaa xulashada meel loogu talagalay foorarsiyada. Goobtu waa inay ahaato mid furan sida ugu macquulsan wareegga hawada cusub, marka laga ilaaliyo dabaylaha xooggan, waa inay jirtaa qorraxda badan.
Peonies waxay noqon kartaa penumbra iftiin, laakiin joogitaanka mugdi ah in ka badan 3 saacadood waxay horseedi doontaa ubax ku filan. Ubaxyada sida peonies laguma dhex beeri karo meel u dhow dhismaha, beerahooda iyo daryeelkooda iyaga ayaa si wanaagsan loo fuliyaa beerta.
Waa muhiim! Peonies Plant meel ka mid ah wareegga hawada wareega, tani waxay kaa caawin doontaa ilaalinta ubaxa cudurada.
Peonies way kufilan karaan ciidda, hadase, haddii aad dooran karto, hubaal waa la qabsadaa. Carrabkani waxaa mar horeba la dhaqay, qoyaan aad u badan oo qoyan.
Ka hor inta aan la beero peonies dacha, waxaad u baahan tahay inaad ciidda u diyaariso ugu yaraan 3 toddobaad ka hor beerashada la qorsheeyay, inta lagu jiro waqtigaas si fiican u dego.
Xeerarka lagu beero ubax caan ah
Sharciga aasaasiga ah ee loogu talagalay maskaxaha sii kordhaya - doorashada meesha. Waxaa muhiim ah in la doorto meel wanaagsan oo uu ku noolaan doono sannado badan.
Ceelkii pion ee kori doona waa inuu ahaado ugu yaraan 60 cm.
Xakee godka iyo saddex-meelood laba ka mid ah buuxin isku dar ah nafaqada ah ee peat, lakabka sare ee ciidda laga saaray iyo humus. Si isku dar ah hal ceel ayaa waxaad u baahan tahay inaad ku darto 400 g oo kale oo ah lafo iyo 200 g oo ah superphosphate, wax kasta oo fiican isku dar. Daboolo godka intiisa kale ee dhulka aan lahayn bacriminta iyo humus.
Inkasta oo aysan adagtahay in la beero peonies, xaaladaha sii kordhaya waa in la buuxiyaa.
Waa muhiim! Ha ku beerin peonies dooxooyinka, waxay bilaabi doonaan inay kala jajabaan biyaha taagan.
Qaababka Daryeelka Bulshada
Haddii maskaxdu ay caadaysteen oo ay bilaabaan inay koraan, ka dibna waa muhiim inaad si fiican u daryeesho, ka dibna way ku farxi doontaa ubaxyada afartan sannadood ah.
Daryeelka saxda ah ee dhirtu waxay saameysaa xajmigeeda iyo muddada ubaxyada, iska caabinta cayayaanka iyo cudurrada. Xannaanada daryeelka ubaxa ee ugu weyn waa:
inta badan loosen iyo mulch ciidda;
ka takhalus caws;
quudi ciidda leh Bacriminta;
Isku xidhka peonies;
ka qaado ubaxyo yaraaday;
diyaarinta peonies xilliga jiilaalka.
Geedo - mid ka mid ah xaaladaha ugu muhiimsan ee koritaanka maskaxda. Kala saaridda cayayaanka ayaa si wanaagsan u saameynaya horumarka iyo muuqaalka geedka. Si taxaddar leh u samee ciidda agagaarkiisa, laakiin ha jarin ubaxa laftiisa.
Peony, sida ubax beerta, waxay u baahan tahay waraabin nidaamsan iyo waqtigeeda. Ku waraabinta doorka muhiimka ah ee bilowga xagaaga, marka maskaxdu ay si firfircoon u korodho oo u gaar ah oo ay kudhiibaan.
Waxaa lagama maarmaan ah in la waraabiyo halbeeg toddobaadkii mar qiyaas ahaan 35 litir oo biyo ah halkii baadiyaha qaangaarka ah. Hubi in ciidda agagaarka qoyan ayan qallajin karin xagaaga, waxaa laga yaabaa in lagama maarmaan noqoto in la sii wado barkada maalin kasta.
Ma taqaanaa? Kala dir 3 g of permanganate ee baaldi ku shub ubaxa. Xalku wuxuu kobcin doonaa koritaanka kelyaha iyo nidaamka xididka, jeermiska ciidda ku wareegsan pion-ka.
Si aad u daboosho carrada leh daryeel weyn, sababtoo ah waxaad u dhaawici kartaa xididdada baadiyaha. Inta lagu jiro dabacsanaanta, ugu badnaan 10 cm ayaa lagu daadin karaa dhulka. Si aad u dabacdo dhulka si fiican uga dib roobka ama is-waraabinta, waxay kaa caawin doontaa in la baabi'iyo qolofta dhulka.
Noocyada quudinta ee pions
Waxaa fiican in la bilaabo quudinta sanadka saddexaad ka dib markii la beero habboon. Ubax firfircoon - calaamad muhiim ah ee fitamiin wanaagsan. Sanadka gudihiisa, looska ayaa u baahan quudin dheeraad ah:
Quudinta ugu horeysa waxaa la fuliyaa guga hore, waxaad isla markiiba karaa ka dib markii barafka ugu dambeeyey. Si arrintan loo sameeyo, isticmaal bacriminta nitrogen-potassium. 15 g of nitrogen, isku mid ah ee potassium, ayaa kala firirsan agagaarka baadiyaha. Waxaa muhiim ah in aan ku dhicin baadiyaha, kaliya dhulka waa in la bacrimiyo.
Labiska labaad ayaa la diyaariyaa inta lagu jiro muddada pion budada, sidaas darteed hagaajin tayada ubax. Potassium, fosfooraska iyo nitrogen ayaa loo isticmaalaa quudinta: 12, 15, 10 g oo ah Bacriminta, siday u kala horreeyaan, oo ay ku rusheeyaan dhulka.
Dharka saddexaad waxaa la sameeyaa laba toddobaad kadib marka ubax. Isku dar ah potassium iyo fosfooraska ayaa sidoo kale ku shubtay dhulka ku jira saamiga 12 g: 20 g oo bacriminta.
Daryeelka foojignaanta, xargaha iyo ka saarida ubaxyo yar yar
Dadka waawayn iyo kuwa isbiirsaday waa in la xirxiraa. Iyada oo ay ugu wacan tahay ubaxyo culus iyo burooyinkeeda, baadiyaha ayaa loola wareegi karaa dhulka, gaar ahaan haddii ay jirto dabayl xoog leh ama roob.
Haddii tani dhacdo, qaybta dhexe ayaa furan oo ku qallaji doonta waqti leh ama, si tartiib ah, waxay noqon doontaa mid qoyan. Sababtaas awgeed, maskaxdu way dhiman kartaa. Ku garaac boodhyada qoryaha, sida haddii ay ilaalinayaan ubax, iyo xirto peonies iyaga oo leh xarig. Tani waxay sii wadi doontaa qaabka ubaxa.
Ka dib markii peonies ka baxo, waxaa lagama maarmaan ah in si deg deg ah looga saaro burooyinkeeda yar. Markaad rabto in aad sameysid peonies ka dib ubax, si fudud uga saarto ubaxa la qalajiyey qayb ka mid ah asliga ah.
Haddii ubax yar oo aan la saarin waqtigii loogu tala galay, markaa tufaaxii dhicisoobay ayaa ka xanaajin doona cudurrada fangasta ee ubaxa. Haddii cimiladu ay qalalan tahay waqtigaan, markaa waxaad u baahan tahay inaad waraabiso dhirta si fiican.
By jiilaalka, peonies waa in lagu daboolo peat, sida balka ama compost. Sababtoo ah cudurrada fangas, caws iyo caleemo ayaan u sameyn doonin tan. Ka qaadida walxaha hoyga xilliga guga, waxaad yareyn kartaa mulch.
Haddii aad qabto su'aal: sida loo dacaayado peonies, ka dibna ogaadaan - peonies dacaayad by gooyn iyo kala qaybinta baadiyaha.
Ku si loo dacaayado peonies by gooyn, Isticmaal qaybta yar ee rhizome oo leh buro hurdo leh. Kala saar jirida duurka ee bisha July, ka hor inta aan la gaarin bisha Sebtembar waxay qaadan doontaa wakhti ay ku qaadato xididka. Sidaa darteed, waxaad kori kartaa pion meel kale oo isticmaalaya dhalida by rhizome.
Waayo qaybta baadiyaha taranta waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho duurka sideed sano. Waxaa lagama maarmaan ah in la ciribtiro caleemaha dhulka oo ku daboolan dhulka, toban santimitir ayaa ku filan. Rixi baxsiga godadka oo dhulka ku buuxi haddii loo baahdo. Laga soo bilaabo Sibteembar, gooyo asliga ah oo horay u soo baxday xididdada iyo iyaga ku beeray meesha aad qorshaysay.
Laakiin hababkaas oo dhan waxaa loo isticmaali karaa dhalmo-farsamooyin xilliga deyrta. Inta badan, waxaad xiiseyneysaa - sida loo tarjuntay peonies guga? Nidaamkani ma aha mid aad u fudud:
dooro maalin leh jawi wanaagsan;
haddii ku dhowaad dhammaan barafka hore u dhalaalay, ka dibna ka saar baadiyaha dhulka;
ka taxadar, ka dib jiilaalka xididada waa mid daciif ah oo ka jari kara dhaqdhaqaaq aan joogto ahayn;
hoos u dhig dhirta cawska dhulka (xididdada dhulka) daloolka oo leh dhul dabacsan oo lagu qasi karo nafaqooyinka;
compost waa ku haboon tahay quudinta; bacriminta xoogan wuxuu waxyeeli karaa ubaxa;
Biyaha si joogto ah u dhaqdhaqaaq, laakiin iska ilaali biyaha.
Miyuu jiri karaa beerta guga? Jawaabta waa dabcan!
Sifooyinka lammaanaha ishortaaga, talooyin ka soo jeeda khubarada
Si ay peonies u noqoto mid caafimaad qaba, qalafsan iyo xoog leh, raac talada khabiirada:
Dooro inaad ku beerato godad furan oo qorrax leh. Meesha qoyan ee maskaxdu waxay si deg deg ah u kala jajabisaa.
Goobta soo degta waa in lagu dejiyaa dabayl xoog leh, sababtoo ah dabayshu mararka qaar way ka sii daran tahay barafka.
Ha ku beerin peonies meel ku dhow xayawaanka waaweyn ama hoosta geedaha.
Dhulka badan ee waxsoosaaraya, is-biirintooda ayaa noqon doona. Isticmaal ciidda loamy, waa nafaqada ugu badan ubaxa.
Markaad beerto, ha ku aaso burooyinkeeda kobcinta geedka, ama aadan heli doonin ubax.
Ha niyad jabin haddii sanadaha ugu horreeya ee maskaxdu aysan si fiican u jajabin. Ka saar caleemaha ubax sanadka ugu horeeya ee ubax, sidaa daraadeed baadiyaha ma isticmaali doono ciidamada loogu talagalay koritaanka ee xididdada.
Ka saar burooyinkeeda dhinacyada ubaxa.